Villa de la Baie -4 **** -187 m2 -Pool & Jacuzzi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKeylodge
I-villa yethu yobunewunewu "Villa de la Baie" ibekwe eSaint-Paul, kufutshane nombindi wedolophu kunye nomda wolwandle. Iyakwazi ukuhlalisa abantu abayi-8 ngedama lokuqubha, ilungele iiholide zosapho okanye nabahlobo.
• Imizuzu emi-2 ukusuka elwandle
• I-187 m² ihonjiswe kamnandi
• Iqula lokuqubha labucala
• Iishiti, iitawuli, iisepha, ishampu iyanikezelwa!
• Ixhotyiswe ngokupheleleyo (i-TV eqhagamshelweyo, iWifi, umenzi wekofu, i-oveni, izitya,….)
• Indawo yokupaka yabucala
• Ugcino lwendlu lubandakanyiwe
• Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elilungiselelwe ukuhlala kwakho, kunye nazo zonke izitya, iglasi, kunye nempahla yasekhitshini, itoasta, iketile, umenzi wekofu, imicrowave, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji enefriji.
• Igumbi lokuhlala elinendawo yokuphumla enesofa yekona, iTV yescreen esisicaba kunye noqhagamshelo lwe-Intanethi oluneFayibha kunye nendawo yokutyela enetafile yokutyela.
• Amagumbi okulala amathathu ane-air-conditioner aneebhedi ezimbini ezinebhedi ezisemgangathweni kunye nendawo yokugcina. Amagumbi amabini okulala anegumbi lawo lokuhlambela labucala elineshawa yase-Italiya, isitya kunye neWC.
• Igumbi lokuhlambela elisebenzayo, elineshawa, isinki kunye nesomisi seenwele.
• I-mezzanine enesithuba seofisi kunye nesofa eguqukayo enezihlalo ezibini.
• Ithafa egqunyiweyo enetafile enkulu yokutya kwakho.
• Igadi enedama lokuqubha kunye nejacuzzi.
• imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iSaint-Denis Roland Garros
• Imizuzu eli-10 ukusuka kwindawo yokuphumla yolwandle yaseSaint-Gilles-les-Bains
• 2 imizuzu ukusuka eSaint-Paul beach
• Kufuphi kuzo zonke izinto eziluncedo (iindawo zokubhaka, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu)
Ifumaneka kufutshane nombindi wesixeko saseSaint-Paul, uye wanenyhweba yokufikelela eNtshona okanye kuMntla wesiqithi.
Uya kufumana zonke iivenkile kunye neenkonzo (iindawo zokubhaka, iiresityu, iibhari kunye neeklabhu, iivenkile ezinkulu) kumgama wokuhamba okanye kufutshane kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Keylodge
Uya kufumana isikhokelo esipheleleyo sokufika ukukubonelela ngayo yonke imiyalelo kunye nezalathiso zokufikelela kwindawo yokuhlala.
Ungasifumana ngefowuni nangee-imeyile. Into ekufuneka uyenzile kukukonwabela ukuhlala kwakho!
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R27132
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint Paul